अब यातायातसम्बन्धी कामको लागि एकान्तकुना धाउन नपर्ने ! – ZoomNP
अब यातायातसम्बन्धी कामको लागि एकान्तकुना धाउन नपर्ने ! प्रकाशित मिति: बुधवार, कार्तिक २४, २०७३ समय - ९:१७:०५ काठमाडौँ, २४ कात्तिक – सेवाग्राहीको चापलाई ध्यानमा राखेर उपत्यकाका तीन स्थानमा स्थापना गरिने यातायात कार्यालयहरू मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा आउने भएका छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा सवारीसाधनको दर्ता, नवीकरण र चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनेको चाप बढेर सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परेपछि सरकारले तत्काल थप कार्यालय स्थापना गर्न दिएको निर्देशन अनुसार कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
थप तीन कार्यालय कलङ्की, चाबहिल र सल्लाघारीमा हुनेछन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार ती तीन कार्यालयले पनि एकान्तकुनाको यातायात कार्यालयले जस्तै सवारी साधनसम्बन्धी सबै काम गर्नेछन् । कार्यालय स्थापनाका लागि बजेट र दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले बताए । उनका अनुसार थप कार्यालयमा उपसचिवको नेतृत्वमा २६ देखि २८ जना कर्मचारी रहनेछन् ।
कार्यालयका लागि घर भाडामा लिन एक महिनाको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ । तत्कालका लागि चलिरहेका निजी ट्रायल सेन्टरहरूलाई भाडामा लिइने प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।